जमानाको कुरा: गुगुल सर्च ईन्जिन र फेशबुक फोटो | Wakhet Diary
जमानाको कुरा: गुगुल सर्च ईन्जिन र फेशबुक फोटो
Posted on October 17, 2013 by Wakhet Diary
सन्सारलाई उपयोगी सर्च ईन्जीन, गुगल अर्थ, गुगल म्याप जस्ता सन्सारै खोज्न सक्ने सर्च ईन्जिन ले फेश बुक को फोटो किन सर्च हुन सक्दैन ?
म कम्पयुटर को बिज्ञ होईन, भन्ने भने राम्रो अनुभव पनि छैन। गुगल सर्च ईन्जिनले किन खोज्न सक्दैन भन्ने कौतुलहमा मलाई गुगल ले फेसबुक मा रहेका फोटोहरु खोज्न नसक्नुको कारण फेशबुक को ईन्क्रेम्टेड सिस्टम भन्दा पनि फेशबुकले फोटोहरुलाई दिने आफ्नो अलग नम्मरीक आईडी हो। किन कि उदाहरण- 1184919_618375568207197_1167341211_n फेश बुकले यसरी दिन्छ आफ्नो फोटो क्याप्सन जस्लाई गुगल को कोड खोज्न सक्दैन। यस्तै प्रयोग केहि बर्ष पहिले तहल्का मचाउन सफल http://wikileaks.org/ ले पनि यहि प्रयोग गरेको थियो। युके र अमेरिका http://wikileaks.org/ यो टेक्स आईडी लाई सजिलै बल्क गर्न सक्थे। सर्वर हरु बन्द गरिदिए तर भोलि पल्ट नै हजार भन्दा बढि मिरर साईड बाट wikileaks को मिरर अपलोड भयो। यस्लाई रोक्न प्रबिधि ले पनि सक्दैन। किन कि कम्प्युटरले अहिले सम्म बाईनरी डिजिट (o-1) मात्रै बुझ्दछ। तर उनिहरले आफ्नो साईड को नाम बाईनरी डिजिट बाट राखेका भने होईनन यस्तो बेबुकुफी उनिहरु गर्दैनन। मात्रै बाईनरी डिजिट प्रयोग गरेर सर्चईन्जिन ,ह्याक्रहरु, फाईरवाल हरुले चिन्न नसन्ने बनाउछन। अमेरिका जस्तो प्रबिधि ले सम्पन्न मुलुक पनि http://wikileaks.org/ लाई बन्द गराउन सक्दैन। किन कि सन्सारको शुन्य देखी मिलयन र बलियन सम्म लेख्न मात्रै 0-9 का9डिजिट नै काफी छ। यो बन्द गर्दा बित्तिकै सन्सार कै प्रबिधि कम्पयुटर सिस्टम नै चल्दैन। गुगल सर्च ईन्जिन ले फेसबुक को फोटो सर्च गर्न नसक्नु को कारण पनि यहि डिजिटल क्याप्सन पनि कारक हो । शुरुका दिनहरुमा फेशबुक को एकाउन्ट नाम पनि गुगल ले खोज्न सक्दैनथ्यो तर अहिले सक्छ। डिजिट को खोज रहस्य पत्ता लगाउने कोड अरु कसै सँग छ भने त्यो गुगल नै पहिलो हुने छ।
फेश बुक को यहि खुबीले नै फेशबुकले आफ्नो चर्चित सोरियल साईट मा नाम लेखाएको हो। अरुलाई आफ्नो बारे मा चिनाउन को लागी केहि त युनिकता हुनु पर्छ। त्यही युनिकता फेशबुक सँग छ। सँसार को हरेक कुना खोज्न सक्ने गुगल ले किन फेशबुक फोटो खोज्न सक्दैन यहि खोज ले नै छिट्टै कोड पनि जन्म हुने छ अनि त हामी ले फेशबुक बाट अपलोड फोटो पनि गुगल मा खोज्न सक्ने छौ। गुगल र फेशबुक को तुलना नै छैन। गुगल ले सन्सार को सोच फेर्न बाध्य बनाउछ। फेशबुक रचनात्मक उपयोगी नभए पनि यो जिरो लेबल- ब्यबसायिकले पनि प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्य सोसियल नेटवर्क साइट चाहि हो। बाध्य भएर पत्रिका देखि- उत्पादन ईन्ड्ट्रीहरु पनि, साधारण, कलकार देखि साहित्यकार लेखक सम्म पेज बाउन पर्ने बाध्यता छ। किन भने जो सन्सार को ट्रेण्ड मान्दैन त्यो पछि पर्छ।
(http://wikileaks.org/ ले सन्सारको बिभिन्न देशको गोप्य कुटनितिक लेटर र सम्झौताहरुको केबल लिक गर्दछ। जस्ले सन्सारलाई नै चुनौती दिएको छ। हामीले बिश्वास गरेका नेता र देशले कस्तो कस्तो काम गरिरहेको छ। धेरै जस्तो कुटनिटिक डकुमेन्टले उनिहरुको सक्कली अनुहार पनि एैनामा उभ्याईदिएको छ भने कम्प्युटर र ईन्टरनेमा हाम्रो गोपनियता सुरछित छैन भन्ने पनि थपिदिएको छ)
(जमानाको कुरा भित्र बाट: गुगुल सर्च ईन्जिन र फेशबुक फोटो)
-स्यानु पाईजा पात्लेखेत-७, म्याग्दी
This entry was posted in 1.वाखेत डायरी, जमानाको कुरा by Wakhet Diary. Bookmark the permalink.